Maanta Oo Kale Ayaa La Aasaasay Golaha Qaramada Midoobay , Maxay Tahay Farriinta Banki Moon?? | Somaliland Today
← New York: Dhakhtar Maraykan Ah Oo Laga Helay Ebola
Golaha Deegaanka Hargaysa Oo Ka Heshiiyay Khilaafkii Hadheeyay Iyo Xildhibaan Dogox Oo Gaar U Baxay →
Maanta Oo Kale Ayaa La Aasaasay Golaha Qaramada Midoobay , Maxay Tahay Farriinta Banki Moon??
(SLT-New York)-Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay Mr. Ban Ki-moon, ayaa soo saaray farriin ku waajahan maalinta UN-ka ee 24 October oo ku beegan Jimcaha maanta, isagoo ka xog-waramay sababihii loo aasaasay Qarammada Midoobay.
Farriinta Xoghayaha Guud oo nuqul ka mid ah saxaafadda loo diray, waxa uu ku yidhi sidan; “Qarammada Midoobay ayaa loogu baahanyahay si ka badan sidii hore waqtigan oo ay jiraan dhibaatooyin badan. Saboolnimo, cudur, argagixiso, takoorid iyo is-beddelka cimilada ayaa keenay dhimashada iyo dhaawaca dad badan. Malaayiin dad ah ayaa weli waxa haysta dhibaatooyinka dhiig-miirashada cambaareynta mudan ee ka timaad ku shaqeysiga qasabka ah, ka-ganacsiga dadka, adoonsiga xaga galmada ah ama xaaladaha aan laysku aamini karin ee ka jira warshadaha, beeraha ama fagarayaasha iyo goobaha macaadinta laga qodo. Dhaqaalaha adduunku weli waa garoon ciyaar oo aan sinnayn.
Asaaskii Qarammada Midoobay wuxuu ahaa ballanqaad adag oo rasmi ah oo loo sameeyay dadyowga adduunka in la soo afjaro weerarrada noocaas ah ee lagu hayo karaamada bani’aadamka iyo in loo horseedo mustaqbal wanaagsan. Waxaa jiray dib-u-dhacyo xannuun badan, waxaanna hadhsan shaqo badan si loo xaqiijiyo aragtida Cahdiga Qarammada Midoobay. Laakiin waxaa dhiirigelin inoo ah guulihii aan gaadhnay.
Himilooyinka Horumarinta Kunleyda ah ee Qarammada Midoobay ayaa dhiirigeliyay ololihii ugu guusha badnaa ee weligeed loo qaaday dabargooynta saboolnimada. Heshiisyada Qarammada Midoobay ee wax ka qabashada sinnaan la’aanta, jirdilka iyo midab kala-sooca ayaa ilaaliyay/difaacay dadka, iyadoo ay jiraan heshiisyo kale oo deegaanka ilaaliyay/difaacay. Nabad ilaaliyeyaasha Qarammada Midoobay ayaa kala dhex galay xoogagga colaaduhu ka dhexeeyaan, dhexdhexaadiyeyaasheenna waxay xalliyeen khilaafaad, shaqaalaheenna gargaarkana waxay dadka gaadhsiiyeen gargaar nolol lagu badbaadinayo.
Waqtgan xasaasiga ah, aynu mar kale sii adkeyno ballanqaadkeenii ahaa awood-siinta dadka la liido iyo kuwa dhibaatada u nugul. Munaasabadda Maalinta Qarammada Midoobay aawgeed, waxaan ugu baaqayaa dowladaha iyo shakhsiyaadkaba inay ka shaqeeyaan danta guud iyo wanaaga guud,” ayuu Xoghayaha Guud ee UN-ku ku yidhi farriintiisa xuska maalinta Qarammada Midoobay.